ယနေ့တွင်တစ်ဦးရှေ့နေချုပ်တို့ကဖြေသည်သင်၏မေးခွန်းများ, အိပ်စက်ခြင်းသည် သာ. ကောင်း၏ယနေ့ညရယူပါ။ ကျနော်တို့အခုဆိုရင်သင်ဟာကူညီပါမည်။ - NJ & နယူးယော့ Real Estate, စမ်း, Foreclosure ကာကွယ်ရေးနှင့်ဒေဝါလီခံခြင်းရှေ့နေများ
ဖက်စ်: (866) 212-4111
စာသားမ: (917) 687-4219
Subscribe နှင့် Follow
တစ်ဦးကအခမဲ့မဟာဗျူဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် Now ကို Call(844) 533-3367
NJ & နယူးယော့ Real Estate, စမ်း, Foreclosure ကာကွယ်ရေးနှင့်ဒေဝါလီခံခြင်းရှေ့နေများ
Real Estate ၏ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
က short ရောင်းမည်
အစမ်း, မည်, မဲ့ကိုးစားအိမ်ယာ၌တရားစွဲဆိုခြင်း
တရား & အနုညာတစီရင်
USER မှ login
ယနေ့တွင်တစ်ဦးရှေ့နေချုပ်တို့ကဖြေသည်သင်၏မေးခွန်းများ, အိပ်စက်ခြင်းသည် သာ. ကောင်း၏ယနေ့ညရယူပါ။ ကျနော်တို့အခုဆိုရင်သင်ဟာကူညီပါမည်။
က Short ရောင်းရန်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှိုင်းယှဉ်ရောင်းမည်
အစမ်း, မည်, Trusts မှနှင့်တရား
အခွန် Lien ရွေးနှုတ်ခြင်း
အခန်းကြီး 13 ဒေဝါလီခံခြင်း
အခန်းကြီး7ဒေဝါလီခံခြင်း
အခန်းကြီး 11 ဒေဝါလီခံခြင်း
သင်၏အကောင်းဆုံးလုပ်ဆောင်မှုကိုစီစဉ်ရန်နှင့်ဆုံးဖြတ်ရန်သင်၏ရွေးချယ်မှုများအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့သွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဂျာစီစီးတီးတွင်အခြေစိုက်သောရှေ့နေများပါ ၀ င်သည့်ပြည့်စုံသောဥပဒေအကြံပေးကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ Hackensack, NJ; Freehold, NJ; နှင့်ဘရွတ်ကလင်း, နယူးယော့။ အားလုံးသင့်အားကူညီရန်ဆက်ကပ်အပ်နှံထားသည့်ရှေ့နေများစွာရှိသည်။
တစ်ဦးရှေ့နေချုပ်ယနေ့တွင်နှင့်အတူ Gimme MY အခမဲ့ In-depth မဟာဗျူဟာအပိုင်း!
ကျနော်တို့ကဒီအစည်းအဝေးထဲမှာ3သောအရာတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်:
အကြှနျုပျတို့သညျအကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ရန်ရွေးတော်မပါလျှင်သင်သည်အခြားရှေ့နေမှယူနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အမှုနှင့် ပတ်သက်. ရေးသားထားသောကြေညာချက်ပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။
အာမခံ 100% သီးသန့်လုံခြုံရေး
နယူးယောက်သို့မဟုတ်နယူးဂျာစီပြည်နယ် Foreclosure ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများယနေ့တွင်ဆက်သွယ်ပါ။
Patel က၏ပညတ္ရုံးများ, Soltis & Cardenas foreclosure တရား, ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံ, ဒေဝါလီခံ, စမ်းနှင့်နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွင်းရှိအိမ်ခြံမြေအရောင်းအပေါ်အာရုံစူးစိုက်, New York နဲ့နယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွက်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဥပဒေရေးရာအခွက်တဆယ်ကိုစီရင်ခင်းကျင်း။ သင်တစ်ဦးလိုအပ်နိုင်ပါသည်ထင်ခဲ့လျှင် NJ Foreclosure ရှေ့နေချုပ် or နယူးယော့ Foreclosure ရှေ့နေချုပ် ယနေ့အခမဲ့တယောက်စကားပြောခြင်းဖြင့်စတင်ပါ။ ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီနှင့်၎င်းတို့၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုအမှုတော်ကိုထမ်းဆောင်အပေါ်အာရုံစိုက်တဲ့မိသားစုအခြေစိုက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျနယူးယောက်သို့မဟုတ်နယူးဂျာစီပြည်နယ်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစု Will အတွက် foreclosure ကာကွယ်ရေးလိုအပ်ပါတယ်ရှိမရှိ။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အဥပဒေရေးရာ Know-ဘယ်လောက်များနှင့်ကျွမ်းကျင်ပိုင်ရှိသည်။ မည်သည့်ပြဿနာကိုပြုပြင်တာတွေဖို့ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းကိုသင်ရွေးချယ်စရာရှိသည်နားလည်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုအားလုံးအကြောင်းကိုယနေ့ရှေ့နေပြောဆိုပါ။
သင် option ရှိသည် - အမေရိကန်စကားပြော TODAY !!
သင့်ရဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ Foreclosure ကာကွယ်ရေးရှေ့နေချုပ်ကိုသုံးပါ။
သငျသညျ foreclosure ရှောင်ရှားသို့မဟုတ်တစ်ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံရချင်တယ်ဆိုရင်, သင်သည်သင်၏နေအိမ်ကယ်တင်ဖို့ရွေးချယ်စရာအားလုံးကူးဖို့အခု Foreclosure ကာကွယ်ရေးရှေ့နေချုပ်နှင့်အတူတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။ ဒီနေ့သင်ယူတိုင်းခြေလှမ်းအနာဂတျတှငျသငျသညျအခြိနျပိုရနိုင်။ foreclosre ဥပဒသိတယ်တစ်ခုရှေ့နေချုပ်ငှားရမ်းသင့်အိမ်စောင့်ရှောက်ခြင်းအတွက်ပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။
အခန်း7ဒေဝါလီခံခြင်း - ငွေဖြည့်ခြင်းမှကြွေးမြီသက်သာခြင်းသို့ရောက်ခြင်းသည်ချက်ချင်းပင်နီးပါးဖြစ်သည်။
တစ်နယူးဂျာစီပြည်နယ်အိမ်ယာရှေ့နေချုပ်အဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အစမ်းတရားစွဲဆိုခြင်းအားအနိုင်ရသို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအနာဂတ်၌တရားကိုရှောင်ရှားနိုင်အောင်သင့်ရဲ့ Will ပြင်ဆင်ထားရန်လိုအပ်ရှိမရှိသင်ကူညီပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံရှိပြီးသားချေးငွေ၏စည်းကမ်းချက်များကိုအထူးပြု။ ဤသည် refinancing မဟုတ်ပါ ... ။
တစ်ဦးကက Short ရောင်းမည်ညှိနှိုင်းတစ်ရောက်ရှိဖို့ရည်ရွယ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောလူများသို့မဟုတ်ပါတီများအကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးဖြစ်ပါတယ် ...
အခန်းကြီး 13 ဒေဝါလီခံ foreclosure ကိုရပ်တန့်ပါလိမ့်မယ် ...
ရှေ့နေသုံးသပ်ချက်အခမဲ့သင်နှင့်အတူသင့် option ရှိသည်
ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါနှင့်ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အ3သောအရာတို့ကိုပြုကြလိမ့်မည်:
1 ။ ငါတို့သည်သင်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါငျးတို့သကျော်သွားလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ယူကိုပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းအချက်အလက်များကိုသင်၏အခွအေနကေိုပတျဝနျးကငျြနေကြတယ်ဆိုတာကိုနားမထောငျဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှနှင့်သင်သည်အဘယ်သို့လာမယ့်ဖြစ်ပျက်ချင်သိလို။ ငါတို့သည်သင်တို့ဖြစ်ပျက်သင့်ကိုယ်ပိုင်စကားအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြချင်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်သင့်ရဲ့နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်သင့်ရဲ့အခွအေနေအဘို့ဖြစ်၏။ အကြိမ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်သူတို့ကိုရှောင်ရှားပေမယ့်ဖြေရှင်းပေးဖို့လိုအပ်နိုင်ဆန္ဒရှိကြောင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်ရင်ဆိုင်နေရကြွေးမြီ၌နေသော clients များရှိသည်။ အဘယ်အရာကိုကျွန်တော်အကြံပြုသူတို့ကအတိတ်ကာလကြိုးစားခဲ့ကြပြီးသူတို့ကအနာဂတျမှာလုပ်ချင်သောအရာကိုအဘယျသို့ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ တစ်ဦး foreclosure အခြေအနေမှာ, foreclosure ပြည်နယ်အတွင်းရှိတရားသို့မဟုတ်ဖက်ဒရယ်တရားရုံးကဲ့သို့အမျိုးစုံဖြေရှင်းချက်တိုတောင်းတဲ့-ရောင်းချခြင်းသို့မဟုတ်ပုံမှန်ရောင်းချအတွက်အိမ်ခြံမြေရောင်းခြင်း, ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုထုတ်ငှားရမ်းရှိပါတယ်, ဒေဝါလီ (ဖြစ်စေမယ့်အခနျးကွီး 7, အခနျး 13 သို့မဟုတ်ပင်နှစ်ဦးစလုံးအခြေအနေကလျှင် ကတောင်းဆိုနေပြီ။ ) သင့်ရဲ့အပြည့်အဝပုံပြင်ကိုနားလည်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဟာ options များအကြောင်းပြောဆိုဘယ်မှာအစိတ်အပိုင်းမှမရနိုင်ပါ။
2 ။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသည်သောကာကွယ်ရေးနှင့် Options ကိုကူးသွားပါလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းရဲ့အခွအေနကေိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်တယ်, အားလုံးမဟုတ်ဖြေရှင်းချက်လူတိုင်းအတွက်အလုပ်လုပ်ကြသည်။ တစ်ဦးကမျြးအခနျးကွီး7ဒေဝါလီခံတစျဦးကမိသားစုများအတွက်မှန်နိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်တို့အဘို့, ကသင့်အိမ်ရောင်းလိုသောအခန်း7Trustee ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့အခွအေနေပတျဝနျးကငျြအသေးစိတျမကူးမသွားမည်မရှိရင်ကျနော်တို့ကအကောင်းဆုံးသင်ကိုက်ညီစေခြင်းငှာရှေးခယျြစရာမပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျအတိတ်ကာလတစ်ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံပွုပါပွီဆိုရငျ, ငါတို့သည်သင်တို့၏အတိတ်ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံပြန်လည်သုံးသပ်မည်ကငြင်းပယ်ခဲ့သည်အဘယ်ကြောင့်မြင်လျက်ကျွန်တော်ထို့နောက်သူကအတည်ပြုရရန်မည်သို့အပေါ်အကြံပြုချက်များစေနိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ဝင်ငွေကိုသင်ရှေ့၌ get သို့မဟုတ်သင့်ဝင်ငွေတိုးမြှင့်ဖို့အစီအစဉ်တစ်ခုဒီဇိုင်းမဖြစ်နိုင်လျှင်ငါတို့သည်လည်းသင်ပြောပြလိမ့်မယ်။ သငျသညျတရားရုံးတွင်သင့်အိမ်ခုခံကာကွယ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ကသင်လွဲချော်ကြပါပြီမည်သည့်ကာကွယ်ရေးရှိပါကကြည့်ဖို့တရားရုံးဖိုင်အားလုံးဖြတ်သန်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ inco ကိုင်တွယ်ခဲ့မလျော်ကန်သောဝန်ဆောင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပေါင်း, စမ်းကိစ္စရပ်များရှိ
3 ။ ကျနော်တို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေ့နေများအဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်သည်မဟုတ်လျှင်သင်ကအခြားရှေ့နေများမှယူနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အခွအေန၏အချက်အလက်များတစ်စုံစုံစာရင်းပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ရှေ့နေအဖြစ်သင်တို့အဘို့ပွဲစဉ်တွင်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ကျွန်ုပ်တို့အင်တာဗျူးစဉ်အတွင်းပြင်ဆင်မှတ်စုမိတ္တူပေးပို့ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင့်ရဲ့အခွအေန၏အချက်အလက်များစာရင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေ့နေအဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်သည်မဟုတ်သည့်အခါအခြားအရှေ့နေများအင်တာဗျူးချင်ပါတယ်လျှင်သင်အဲဒီကိုသုံးနိုင်သည်။
ကျနော်တို့တင်ပြကြသည်တိုင်းကိစ္စတွင်မယူကြဘူး။ ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အအနိုင်ရမနိုင်လျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့ပြောပြကြလိမ့်မည်။ အကြှနျုပျတို့သညျမကူညီနိုင်လျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ပြောပြလိမ့်မယ်, သင်၏ရွေးချယ်မှုအားလုံးစူးစမ်းလေ့လာပေမယ့်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာပါလိမ့်မယ်။
ကျနော်တို့ပညတ်တရား၏ကွဲပြားခြားနားသောရှုထောင့်ကိုအာရုံစိုက်ကြောင်းရှေ့နေများရှိသည်။ ကျနော်တို့ Foreclosure ကာကွယ်ရေးအာရုံစိုက်ကြောင်းနယူးဂျာစီပြည်နယ်လိုင်စင်ရှေ့နေများ, အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်, ဒေဝါလီခံခြင်း, စမ်းနှင့်ကြွေးမြီငွေကောက်ခံ / Consolidated ရှိသည်။ ကျနော်တို့ Foreclosure ကာကွယ်ရေးအာရုံစိုက်ကြောင်း New York ကလိုင်စင်ရှေ့နေများ, အိမ်ခြံမြေအရောင်းအဝယ်, ဒေဝါလီခံခြင်း, စမ်း, မိသားစုဥပဒေနှင့်ကြွေးမြီငွေကောက်ခံ / Consolidated ရှိသည်။ သငျသညျအကြှနျုပျတို့ကိုကိုဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာကျနော်တို့ခေတ္တမျှသငျသညျအကောင်းဆုံးကိုသင်၏ကိစ္စနှင့်အတူသင်ကူညီနိုငျသောရှေ့နေချိတ်ဆက်သေချာရန်သင့်အားလူတွေ့မေးမြန်းဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
ယနေ့အမေရိကန်စကားပြော - သင် option ရှိသည်
ကျနော်တို့သင်ကူညီ, သို့မဟုတ်သင့်အခွအေနေပတျဝနျးကငျြအချက်အလက်များတစ်စုံစုံစာရင်းနှင့်အတူတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောရှေ့နေနှင့်အတူစကားပြောဖို့ရန်သင့်အားတက်သတ်မှတ်နိုင်သည်ဖြစ်စေသေချာစေရန်တစ်ဦး3ခြေလှမ်းဖြစ်စဉ်ကိုရှိသည်။ ကျနော်တို့လူတိုင်းအတွက်ညာဘက်မထိုက်မတန်သော်လည်း, ငါတို့သည်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်လာမယ့်ရှေ့နေဒါကြောင့်သင်ကူညီကြလိမ့်မည်, သင်မှန်သင်လိုအပ်သည့်အဖြေကိုမှတတ်နိုင်သမျှနားလည်ပါသည်။
ကျနော်တို့ကလူနေမှုလိမ့်မည် / အဆင့်မြင့်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာညွှန်ကြားချက်များနှင့်အတူ, သင်ကအလိုတော်ကိုပွငျဆငျကူညီသို့မဟုတ်သင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုကာကွယ်ပေးရန်ယုံကြည်မှုကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နယူးဂျာစီပြည်နယ်စမ်းရှေ့နေများ၏ executor သကဲ့သို့သင်တို့အထောက်အကူပြုပါလိမ့်မယ်
ဒီအခိုငျအမာ foreclosure ထံမှလူမျိုးနေအိမ်များကယ်တင်ကူညီရန်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များလုံးကိုနယူးဂျာစီပြည်နယ်သို့မဟုတ်နယူးယောက်ဖြစ်စေများတွင် foreclosure ကာကွယ်ရေးအာရုံစိုက်ပါ။ ကျနော်တို့တရား, ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံသုံးပြီး foreclosure ဖြေရှင်းဘို့အဓိကဖြစ်နိုင်ခြေနားလည်,
နယူးဂျာစီပြည်နယ်ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်နယူးယောက်မြို့ဒေဝါလီခံခြင်းအပါအဝင်ဒေဝါလီခံခြင်း, နှစ်ဦးစလုံးစားသုံးသူနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဖယ်ရှားကူညီဖို့သို့မဟုတ်ဒေဝါလီခံတရားရုံး၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်မှာသူတို့ရဲ့အကြွေးတွေပြန်ဆပ်ဖို့ဒီဇိုင်းဖက်ဒရယ်တရားရုံးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်ကြသည်။ အတွက်ဖက်ဒရယ်ဥပဒ
Pro ကို Bono နာရီအလုပ်လုပ်ခဲ့
ပေတရုနှင့် Veer နှစ်ဦးစလုံးဟာအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်နှင့်ချက်ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းများသူတို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူခဲ့ကြပြီ။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့မေးခွန်းများအဖြေကိုရဖို့သေချာစေပြီမသာပေမယ့်မှန်ကန်တဲ့အသိပညာပိုကောင်းတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အောင်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါသည်။ Excellent က။
သငျသညျနယူးဂျာစီပြည်နယ်အတွက်ပညတ်တရား၏အမျိုးစုံဒေသများနားလည်သောသူရှေ့နေများရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းကိုရှာဖွေရှာဖွေနေနေတယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့ညာဘက်တစ်ဦးကို client သကဲ့သို့သင်တို့ပြုမူဆက်ဆံမည်သူအတွေ့အကြုံရှိရှေ့နေများအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့သည်ရှေ့နေချုပ်၏ Will & အင်အားကြီးနိုင်ငံများ, စမ်း & Estates, အကြွေးကယ်ဆယ်ရေး, ကိုယ်ပိုင်ဒေဝါလီခံခြင်း, နှင့် Business အိမ်ခြံမြေ Matters, အိမ်ခြံမြေ, Foreclosure ကာကွယ်ရေးဥပဒေ, ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံ, အိမ်ခြံမြေဝယ်ယူသို့မဟုတ်ရောင်းဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများနှင့်ဆက်စပ်သောအမှုလိုက်တဲ့သူအများအပြားကိုရှေ့နေများရှိ ဒေဝါလီခံ။ ကျနော်တို့ကိုမှန်ကန်အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုပေးမယ့်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်အလုပ်လုပ်အဖြစ်ငါတို့သည်သင်တို့၏အခွင့်အရေးများကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများကိစ္စရပ်များဤအမျိုးအစားအားလုံးအပြန်အလှန်လမ်းကိုနားလည်ပါသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ဖုန်းပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ပါဒါမှမဟုတ်တိုင်ပင်ဘို့ငါတို့ရုံးများ၏တဦးတည်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခြင်းရှိမရှိသင့်ရဲ့ privacy ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ပါလိမ့်မယ်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စသင်တို့သည်ငါတို့၏အခိုငျအမာကိုဆက်သွယ်ဖို့ရွေးချယ်ပုံကိုငါတို့သည်သင်တို့၏ရွေးချယ်စရာကျော်သွားလိမ့်မည်။
ကျနော်တို့ Hudson ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေဖြတ်ပြီးဂျာစီစီးတီး, NJ အတွက်ရုံးများရှိသည် ဖြစ်. , Hackensack, အဘာဂန်ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေထောင့်မှာတစ်ဝှမ်း NJ; Freehold, NJ ချ Monmouth ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေလမ်း, မန်ဟက်တန်, Midtown နယူးယောက်စီးတီးရှိ site တစ်ခုနှင့်အတူနယူးယော့; နှင့်ဘရွတ်ကလင်း, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖြည့်ဆည်းဖို့ဘရွတ်ကလင်းဒေဝါလီခံခြင်းတရားရုံးထံမှလမ်းပေါ်ကိုဆင်းသောဓမ္မရာဇဝင်ကောင်တီအုပ်ချုပ်ရေးရုံးကနေဖြတ်ပြီးနယူးယော့။ ကျနော်တို့နယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့် New York မှာအားလုံးတရားရုံးကိစ္စရပ်များများအတွက်အများဆုံးဖြစ်ပွားမှုအပေါ်အခမဲ့ညှိနှိုင်းပေးပါတယ်။
(844) 533-3367 မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါသို့မဟုတ်မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်ပို့ ကျေးဇူးပြု. [အီးမေးလျ protected]
2018 နှင့်ကျော်လွန်ပြီးသင့်ရဲ့ဥပဒေရေးရာနှင့်ဘဏ္ဍာရေးလိုအပ်ချက်အားလုံးဝတ်ပြုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေ့အကြုံကခိုလှုံပါ၏။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီတစ်ခုကသင်ကူညီပေးနေထံအပ်နှံသည်။
Veer P. Patel က, Esq ။နယူးဂျာစီ - Managing Partner
Derek (DJ သမား) Soltis, Esq ။ , MBA ဘွဲ့ရ / က MSဒေဝါလီခံခြင်းအလေ့အကျင့်မန်နေဂျာ - Partner
Lazaro Cardenas, Esq ။အိမ်ခြံမြေအလေ့အကျင့် Manager ကို
ဂျေဆန် C. Bost, Esq ။ , MBA ဘွဲ့ရနယူးယောက် - Managing Partner
အဆိုပါဘလော့ မှစ. နောက်ဆုံးပေါ်
NJ Sheriff ရောင်းချခြင်းမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်၌ NJ Foreclosure ရှိအိမ်ငှားအခွင့်အရေးများ
ဇန်နဝါရီလ 27, 2020
အခန်း ၁၃ ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ဒေဝါလီခံခြင်းဖြင့်ဖုံးလွှမ်း Pay ကိုနေ့ချေးငွေများဖြစ်ပါသလား
1 ။ ငါတို့သည်သင်တို့ရင်ဆိုင်ရသည့်ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များအပေါငျးတို့သကျော်သွားလိမ့်မည်။2။ ငါတို့သည်သင်တို့ရှိသည်သောကာကွယ်ရေးနှင့် Options ကိုကူးသွားပါလိမ့်မယ်။3။ ကျနော်တို့ငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေ့နေများအဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးမထိုက်မတန်သည်မဟုတ်လျှင်သင်ကအခြားရှေ့နေများမှယူနိုင်ပါတယ်ကြောင်းကိုသင်၏အခွအေန၏အချက်အလက်များတစ်စုံစုံစာရင်းပြင်ဆင်မည်ပါလိမ့်မယ်။
တစ်ဦးကအခမဲ့မဟာဗျူဟာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲသည် Now ကိုဆက်သွယ်ပါ
suite 307, ဂျာစီစီးတီး, NJ 07306
ဖုန်းနံပါတ်: (844) 533-3367
အပေါ်ထပ်, Hackensack, NJ 07601
1 Broad လမ်း
suite 2511, ဘရွတ်ကလင်း, နယူးယော့ 11242
Bronx, နယူးယော့ 10461
89 Market ကစိန့်, 4th ကြမ်းပြင်,
Patel က, Soltis & Cardenas ၏ပညတ္ရုံးများဂျာစီစီးတီး, Freehold, Hackensack, မန်ဟက်တန်နှင့်ဘရွတ်ကလင်းအတွက်ရုံးများနှင့်အတူနယူးဂျာစီပြည်နယ်နှင့်နယူးယောက်မြို့ဧရိယာ၏နိုင်ငံတော်တစ်လျှောက်လုံးဖောက်သည်ဒေဝါလီခံ, foreclosure နှင့်ချေးငွေပြုပြင်မွမ်းမံကိုယ်စားပြုမှုကိုပေး။ ဒီ website တစ်ခုဥပဒေရေးရာကြော်ငြာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ website တွင်သတင်းအချက်အလက်သာယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ရည်ရွယ်ချက်များအဘို့ဖြစ်၏။ ဒီ site ပေါ်တွင်အဘယ်အရာကိုမျှမဆိုတစ်ဦးချင်းစီအမှုသို့မဟုတ်အခွအေနေအဘို့တရားဥပဒေဆိုင်ရာအကွံဉာဏျအဖြစ်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်။ ဤအချက်အလက်ဖန်တီးဖို့မရည်ရွယ်သည်, ပြေစာသို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရှေ့နေ client ကိုကြားဆက်ဆံရေးဖွဲ့စည်းမထားဘူး။ ကျနော်တို့ရှေ့နေများဖြစ်ကြပေမယ့်တစ်ဦးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးသည်အထိငါတို့သည်သင်တို့၏ရှေ့နေများမရှိကြပေ။
ရှေ့နေချုပ်ကြော်ငြာခြင်း။ အတိတ်ရလဒ်များကိုအနာဂတ်ရလဒ်ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူး။ ကျနော်တို့ကအကြွေးကယ်ဆယ်ရေးအေဂျင်စီဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လူတွေဒေဝါလီခံခြင်း Code ကိုအောက်မှာကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက် file ကိုကူညီပေးပါတယ်။
Patel က & Soltis, LLC နေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်© 2020 ။ မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး။